IiNkqubo ezintathu ekufuneka uziSebenzisile kwiShishini le-Ecommerce ngokukuko | Martech Zone
IiNkqubo ezintathu ekufuneka uQalile kwiShishini lakho le-Ecommerce ngokufanelekileyo
NgoLwesibini, nge-18 kaDisemba ngo-2018 NgoMvulo, nge-27 kaJanuwari, 2020 USarah Saker
Baninzi abathengisi be-ecommerce phaya-kwaye ungomnye wabo. Ukho kuyo ixesha elide. Kananjalo, kuya kufuneka ubenakho ukukhuphisana nezona zilungileyo kumakhulu amawaka ezivenkile ezikwi-Intanethi okwangoku ezikwi-Intanethi. Kodwa uyenza njani loo nto?
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho injenge ekhangayo ngokunokwenzeka. Ukuba ayenziwanga kakuhle, ayenzi njalo unegama elihle, iifonti zakho zincinci kakhulu (okanye zikhulu kakhulu), ilogo yakho iyadibana kunye nemvelaphi yevenkile yakho ekwi-intanethi, amaqhosha okuhambisa asendaweni engathandekiyo (cinga ibha yokukhangela!), Okanye ukuba imibala oyikhethileyo kwiwebhusayithi yakho yenza ayisebenzi kakuhle kwinkcubeko oyithengisayo, emva koko kuya kufuneka uphinde ucinge uyilo lwakho. Leyo yindawo yakho yokuqala.
Ukuba ivenkile yakho ye-ecommerce ine professional kuziva ngathi, emva koko kuya kufuneka ujonge iimveliso ozithengisayo. Ngaba zezona zinomtsalane kubaphulaphuli ababanzi, okanye ngaba ujonge kwiqela elithile labathengi? Nokuba yeyiphi indlela ilungile, kodwa inokuchaphazela impumelelo yakho ukuba awukutya abathengi bakho. Kwakhona, ngaba ezi zinto zikumgangatho ophezulu, okanye ngaba zithengwa ngaphandle ngexabiso eliphantsi? Ukuba iimveliso zakho ziyawa, uya kuba njalo nawe.
Jonga ezakho urhwebo. Ulithengisa njani ishishini lakho? Zeziphi iisayithi ozithengisayo kwaye zisebenza kangakanani la maqonga? Ngaba uyisebenzisa kakuhle imali yakho? Qiniseka ukuba ufumana eyona buck yakho inkulu kwaye iinzame zakho zisebenza ngokufanelekileyo.
Ukuba konke oko kuyasebenza, lixesha lokuba uhlengahlengise ishishini lakho. Ukuba yonke enye into ikhona, ungaqala ukujonga iinkqubo zakho kunye nemisebenzi yokuphucula inkonzo yabathengi, isantya senkonzo, kunye nokuzaliswa kwempahla.
Ukukunceda ngale miba yeshishini lakho, sixoxa ngezinye zezonaapps zingcono onokuzisebenzisa ukulawula ivenkile yakho ye-ecommerce.
The Uphando Uhlalutyo I-app iya kukunika umda kumacala omabini wentengiso yeshishini lakho kunye nentengiso. Insiza ikuvumela ukuba ugcine umkhondo wokundwendwela iwebhusayithi yakho. Ungalibona inani leembono elifumana iphepha ngalinye. Unokubona inani lotyelelo abalufumanayo ekuhambeni kwexesha, kumiselwe ziifilitha ozibeke kusetyenziso.
Le app ikuvumela ukuba ubone apho zivela khona izimvo. Uninzi lwabathengi bakho lunokuba luyokuthenga indawo yakho ye-ecommerce phesheya kwaye awuyiqondi. Ukubona ezi zikhokelo kuya kukuvumela ukuba uguqule imodeli yeshishini lakho kwaye ufumane ivenkile yakho ekwi-intanethi ngakumbi kubathengi bangaphandle abanomdla wokuthenga iimveliso zakho.
Kwakhona, ngokubona amaphepha athengisayo, ungabona iintlobo zeemveliso abathengi bakho abazithengayo. Oku kuyakukunika ithuba lokususa naziphi na izinto ezingathengisiyo kwaye uzise uluhlu lweemveliso abathengi bakho abazifunayo.
Bhalisela iGoogle Analytics
Le app emangalisayo! Amashishini ezitena kunye nodaka Kuya kufuneka bathembele kwimodeli yendabuko yokubonelela iivenkile zabo ngeemveliso: kufuneka bafumane abathengisi abathenga iimveliso abafuna ukuziphatha ezivenkileni zabo, emva koko bazithenge ngesixa esikhulu ukuze bafumane amaxabiso asezantsi (okanye ngenxa yokuba Iivenkile ezithengisa yonke into kufuneka ubungakanani beodolo encinci ukuba ifikelelwe).
Ke kuya kufuneka balinde imveliso ukuba ifike kwiiveki kamva. Kwimeko yokuthengisa abathengi njengeWal-Mart kunye neThagethi, izinto ezithengiswayo kufuneka zihanjiswe kuqala kwiziko lokuhambisa ngaphambi kokuba zilungelelaniswe, zilayishwe kwivenkile nganye, emva koko zithunyelwe kwiivenkile ezohlukeneyo.
Abathengisi be-ecommerce baya kuxhomekeka kubathengisi bemveli kuninzi lweemveliso zabo. Kodwa amaxesha ayatshintsha, kwaye u-Oberlo unika iivenkile ezincinci, ezikwi-Intanethi indlela engcono yokuthengisa iimveliso zabo.
Endaweni yokuthenga kumthengisi ngobuninzi, awunyanzelekanga ukuba u-odole into-ubuncinci de umthengi abeke iodolo. I-Oberlo ikuvumela ukuba ungenise iimveliso ezivela kumawakawaka wabanikezeli ngokuthe ngqo kwivenkile yakho ekwi-intanethi. Uya kuthi emva koko ubeke i-odolo yomthengi kunye nomthengisi. Umboneleli uya kuthi emva koko awise iodolo kumnyango wangaphambili womthengi.
Olu lutshintsho olukhulu kulwalamano lomthengisi / lwevenkile ethengisa yonke into kuba umthengisi akufuneki ahlawule isixa esikhulu seemveliso. Into iya ngqo ngqo kwiivenkile ezithengisayo ukuya kumthengi.
Bhalisa simahla eOberlo
I-SalesforceIQ yenye yezona zixhobo ezilungileyo kakhulu zakho Ulawulo oludibene nabathengi. Le app ikunika amandla okuphendula kwimicimbi yabathengi; ukuba kukho ingxaki kwiinkqubo, abathengi bakho baya kukwazisa. Le app yeCRM izakuvumela ukuba uphendule kwezi ngxaki, kokubini kumbono wabathengi nakwezakho izimvo zangaphakathi. Ungaqala ukulungisa ingxaki ngokukhawuleza.
I-SalesforceIQ ikwadibanisa onke amajelo eendaba ezentlalo kwiqonga elinye eliphakathi. Unako ukufikelela kwiindwendwe zakho ezonwabileyo kwaye unxibelelane nazo, uzibulele ngendlela enokubonwa ngabantu bonke. Unokuzibandakanya nabahlobo kunye nabahlobo babahlobo babathengi bakho ngenjongo yokuziguqula zibe ngabathengi abatsha. Ngale app yeCRM, unokuvelisa ukuphinda ishishini kunye nokuqalisa imijelo yengeniso kwivenkile yakho ye-ecommerce.
Ngeziapps, uya kuba nakho ukuphatha ishishini lakho ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Uya kuba nakho ukugcina imveliso oyikhethileyo kunye nee-stocks ngelixa usebenzisa ithuba lokunxibelelana nabathengisi kunye nabanikezeli ngokuzaliswa ngokukhawuleza.
Uyakukwazi ukulawula ubudlelwane phakathi kwabaxhasi kunye nonxibelelwano, kunye nentengiso kwabanye abanokubakho. Ukuphonononga ukuthengisa kweziapps kuya kukunika amandla okusabela kwiindlela zeshishini ngexesha lokwenyani, zikunike ithuba lokunyusa ukuthengisa kwangolo suku.
Ngaleapps, uyakwenza ukuba ishishini lakho lisebenze ngakumbi kwaye likhuphisane.
Bhalisela uvavanyo lweSimahla lokuThengisa
tags: eCommerceukuthengisa kubalulekile
USarah Saker ngumqeqeshi oshishino kunye nombhali ozimeleyo ojolise ekuncedeni iinkqubo zokumisela ii-SMB zokuxhasa abathengi kunye nokukhula okungaxelwa kwangaphambili. Xa engabhali okanye eqeqesha, uSarah unokufumaneka kuye (encinci, kodwa ekhulayo!) Kwifama yosapho. Nxibelelana noSarah malunga.me/ssaker yoqeqesho okanye yokubhala uncedo.
Iindlela ezi-6 apho iZimpawu zoLuntu ziPhucula isikhundla
Ungazicima njani zonke iiNgcaciso zeWindowsPress